Abenzi be-CWDM abasebenza | I-China Passive CWDM Factory & Abahlinzeki
I-HUA-NET I-coarse wavelength division multiplexer (CWDM) isebenzisa ubuchwepheshe obuncane bokumboza ifilimu nokuklama okuphathelene nokufakwa kwensimbi okuyi-non-flux metal optics. Inikeza ukulahleka kokufakwa okuncane, ukuhlukaniswa kwesiteshi okuphezulu, ibhendi ebanzi yokudlula, ukuzwela kokushisa okuphansi kanye ne-epoxy free optical path.
I-CWDM MODULE / RACK (4,8,16,18 ISITESHI)
I-HUA-NET inikeza uhla oluphelele lwamayunithi we-CWDM Mux-Demux ne-Optical Add Drop Multiplexer (OADM) ukuze ivumelane nazo zonke izinhlobo zezinhlelo zokusebenza nezixazululo zenethiwekhi. Ezinye ezivame kakhulu yilezi: IGigabit & 10G Ethernet, i-SDH / SONET, i-ATM, i-ESCON, iFiber Channel, i-FTTx ne-CATV.
I-HUA-NET Coarse wavelength division multiplexer (i-CWDM Mux / Demux) isebenzisa ubuchwepheshe obuncane bokumboza ifilimu nokuklama okuphathelene nokufakwa kwensimbi okuyi-non-flux metal optics. Inikeza ukulahleka kokufakwa okuphansi, ukuhlukaniswa kwesiteshi okuphezulu, ibhendi ebanzi yokudlula, ukuzwela kokushisa okuphansi kanye ne-epoxy free optical path.
Imikhiqizo yethu ye-CWDM Mux Demux inikela ngesiteshi esingu-16 noma i-Multiplexing yesiteshi esingu-18 ngentambo eyodwa. Ngenxa yokuthi ukulahleka kokufakwa okuphansi kuyadingeka kumanethiwekhi we-WDM, singaphinda sengeze i- "Skip Component" kumodyuli ye-CWDM Mux / Demux ukunciphisa i-IL njengenketho. Uhlobo lwephakheji ejwayelekile ye-CWDM Mux / Demux ifaka phakathi: Iphakethe lebhokisi le-ABS, i-LGX pakcage ne-19 ”1U rackmount.
Transmitter Wangaphandle Transmitter, I-Sfp C ++, Optical Fibre Module, I-Xfp Transceiver, IHuawei Qsfp +, Intengo ye-Huawei Olt,